Nin Somalia oo ka cararay Uk,kana baxsaday Gacanta Booliiska Hindiya oo noqaday Ninka loogu doon-doonista badan yahay+Kiiska loo haysto | Qaran News
Writen by Qaran News | 2:49 am 17th Apr, 2021
Nin Somalia oo ka cararay Uk,kana baxsaday Gacanta Booliiska Hindiya oo noqaday Ninka loogu doon-doonista badan yahay
Booliska ayaa shaaciyay sawirrada Maxamed Cali Cige oo laga qaaday xilli ay gacanta ku hayeen booliska Hindiya sanadkii 2013
Booliska UK ayaa ugaarsanaya eedeysane baxsad ah oo lala xiriirinayo fal dil ah oo sanadkii 2010-kii koonfurta Wales loogu geystay wiil 17 jir ahaa, waxaana hadda lagu raad joogaa xog cusub.
Aamir Siddiqi waxaa lagu dilay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Cardiff 11 sano ka hor kaddib markii ragga dilka fuliyay ay ku khaldameen.
Maxamed Cali Cige, oo 43 jir ah ayaa u cararay dalka Hindiya ka hor inta aysan dambi baareyaasha Wales soo xirirn maadaama lala xiriirinayay dilkaas.
Booliska koonfurta Wales ayaa sheegay in ninkan uu yahay qofka eedeysanaha ah ee loogu doon doonista badan yahay Wales oo dhan, waxayna horaantii isbuucan sii daayeen sawirradiisa oo aan horay loo arkin.
Mr Cige waxaa sanadkii 2011-kii lagu xiray gudaha Hindiya isagoo loo heysto tuhun la xiriira dil.
Laakiin wuxuu baxsaday sanadkii 2017-kii xilli ay booliska Hindiya isku diyaarinayeen inay u soo gacan galiyaan booliska UK. Wuxuu ku dhex dhuuntay musqul ku taalla xarun tareenka ee magaalada New Delhi.
Aamir Siddiqi had been offered a place to study law at university and was was described as a “bright, gentle and courteous boy”
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in sawirrada Mr Cige, oo dagganaa xaafadda Riverside ee magaalada Cardiff, laga qaaday markii ay gacanta ku hayeen booliska Hindiya sanadkii 2013-kii. Sababta loo shaaciyay ayay ku tilmaameen codsi shacabka looga doonayo inay macluumaadka ninkaas ku saabsan soo gudbiyaan.
Arrintan ayaa timid 11 sano kaddib markii Aamir lagu dilay waalidiintiisa hortooda xilli uu sugayay macallinkiisa Qur’aanka oo ugu imaan jiray gurigiisa ku yaalla deegaanka Roath.
“Xog ayaa la helay kaddib markii dadweynaha laga dalbaday garab haddana booliska Koonfurta Wales waxay rajeynayaan inay u mahad celiyaan dadka macluumaadka u soo gudbiyay,” ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay taliska booliska Koonfurta Wales.
Qoraalka sawirka,Ben Hope iyo Jason Richards waxaa xukun ku ridday maxkamadda Swansea Crown
Jason Richards iyo Ben Hope waxaa sanadkii 2013-kii lagu xukumay midkiiba 40 sano oo xabsi ah, kaasoo ay ku muteysteen dilka wiilka dhalinyarada ahaa.
Labadana nin ayaa howshaas galay kaddib markii uu lacag dhan £1,000 siiyay nin ganacsade ah oo ka careysnaa heshiis hantiyeed oo burburay, isagoo doonayay inay dilaan aabbe dhalay afar carruur ah oo ku noolaa guri ku yaalla waddada dariskiisa ah.
Garsoorihii dhageysanayay kiiska maxkamadda labada nin ayaa Aamir ku tilmaamay inuu ahaa “wiil fahmad badan oo ay qoyskiisa aad u jeclaayeen”.
Qoraalka sawirka,Afar sano kaddib baxsashadiisii, Mr Cige meel uu joogo lama oga
“Waan sii wadi doonnaa inaan la shaqeyno waaxda dambiyada la tacaasha ee qaranka iyo hayadaha booliska ee caalamiga ah si loo raadiyo Mr Cige dibna loogu soo celiyo UK,” ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay booliska.
Dambi baareyaasha ayaa sheegay in qoyska Aamir ay si joogto ah ugu wargalin doonaan xaaladaha soo kordha. Qof walba oo xog haya ayay ka codsadeen in uu lasoo xiriiro booliska ama uu macluumaadka uu hayo ku gudbiyo bogga internet-ka ay ku leeyihiin booliska.